ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ယောဘသည်ရှာဖွေရေး ဗီဇာ
အပို CV ကို Add - ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ရှေးခယျြသောတည်နေရာများအတွက်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ updated CV ကို upload လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအဓိကအားဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယူအေအီး, ကာတာ, ကူဝိတ်နဲ့ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားအဘို့ဤ service ကိုထည့်သွင်းဖို့ကျွမ်းကျင်သူများအကြံပေးနေကြသည်။
ကာတာနိုင်ငံမှဗီဇာ - ကျနော်တို့လူအပေါင်းတို့သည်ကာတာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ခစျြ! get တစ်ဦး 60 ရက်အတွင်းအလုပ် + ငွေ Back ကိုအာမခံ! လူတိုင်းလူတိုင်းကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကိုအံ့ဩနေကြတယ်ဆိုပါကကာတာနိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့ဖို့မဆိုလမ်းလည်းမရှိ ?. ငါတို့သည်သင်တို့၏အဖြေကိုများမှာ! ကျွမ်းကျင်သူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ငါထားမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအဘို့ကိုသာတစ်ချိန်ကပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ကာတာနိုင်ငံရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, HR မန်နေဂျာများနှင့်တကွသင် connect နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဗီဇာ + နေထိုင်ရန် + လုပ်ငန်းခွင်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာအမြဲသေချာသင်အချိန်ပေါ်ရှိရအပြည့်အဝထောက်ခံမှုငါတို့ဘက်မှာထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်အောင်။
ကနေဒါတစ်ဗီဇာရယူပါ! ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ No.1 နေရာပြောင်းရွှေ့ပံ့ပိုးပေးကြသည်။ 2009 မြောက်အမေရိကမှရွှေ့ဖို့ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာလုပ်သားများကူညီပေးနေကတည်းကကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း။
သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထံမှဗီဇာနှင့်အတူရှိရတဲ့အခါ။ သင့်အနေဖြင့်စော်ဘွားရရှိပါသည်! အတုဗီဇာပေးသူအဘို့သင့်အချိန်ဖြုန်းနဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်အသုံးမပြုပါ !.
အဘယ်ကြောင့်ငါဒူဘိုင်းနှင့်အသင့်အသင့်အရမ်းချစ်? ကိုယ့်ကိုကိုယ်သစ်တစ်ခုဘဝရယူပါ! သငျသညျကိုအံ့ဩနေကြတယ်ဆိုပါကမည်သည့်လမ်းလည်းမရှိ တစ်အားလပ်ရက်အဖြစ်ယူအေအီးရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အဖွဲ့ ဗီဇာသင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။